AFCSP & NFCSP - Xarunta Agabka iyo Naafada (ADRC)
Barnaamijyada Taageerida Daryeel bixiyaha Qoyska
Caawinta Maaliyadeed ee Daryeel Nasinta
Baadh ikhtiyaarka kugu habboon:
Waxaan daryeelayaa qof qaba waallida
Barnaamijka Taageerada Daryeel-bixiyaha Qoyska ee Alzheimer (AFCSP)
Barnaamijka AFCSP wuxuu caawiyaa qoysaska, sida kuwaada oo kale, daryeelida qof waallida qaba.
Ujeeddada ayaa ah in laga caawiyo dadka waallida qaba inay ku dhex noolaadaan bulshada dhexdeeda intii ugu macquulsan.
Waa maxay AFCSP?
Ujeeddada AFCSP ayaa ah in lagaa caawiyo sidii daryeele u helli lahaa adeegyada bulshada. Haddii aad u qalanto, barnaamijka wuxuu bixiyaa lacag lagu iibsado alaabada iyo adeegyada taageeraya daryeelka daryeelaha qof aad jeceshahay gurigiisa inta ugu badan ee suuragalka ah. Maalgalintu way xadidan tahay. Codsiyada loo maro ADRC ayaa loo baahan yahay (hoos ka eeg).
Miyaan u qalmaa AFCSP?
Xannaaneeye ahaan, waad u qalantaa haddii adiga iyo qofka aad jeceshahay ee waallida qaba aad ka soo baxdo shuruudaha soo socda:
1) $ 48,000 dakhliyada guud ee qofka * waallida iyo xaaska / seyga
* Qiimaha la xiriira daryeelka jahawareerka waa laga goyn karaa goorta xisaabinta daqliga guud
2) Cudurka Alzheimer ee uu dhakhtarku xaqiijiyey ama waallida la xidhiidha
3) Hada guriga dagan
4) In aan lagu helin nasniin iyada oo loo marayo Tanaasulid Barnaamijka Xulashada Bulshada (COP) ama Barnaamijka Daryeelka Qoyska
Waa maxay taageerada bulshada ee ay bixin karaan AFCSP?
Alaabada caadiga ah iyo adeegyada waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
Nasniinta - waqti kali ah oo aad ku socoto howlo ama nasasho
Wax ka badalida amniga guriga
Qalabka caafimaad ee laqabatimay
Nidaamyada waxqabadka degdegga ah
Diyaargarowga cuntada, adeegyada daryeelka guriga, kaalmada daawada, shaqada duurka
Sideen u dalban karaa AFCSP?
Si aad wax uga sii ogaatid barnaamijka, ama aad u dalbato, na soo wac: (920) 448-4300.
Waxaan ahay awoowe / ayeeyayaal daryeela ilmahayga (carruurta)
Barnaamijka Taageerada Daryeel-bixiyeyaasha Qoyska ee Qaranka (NFCSP)
Caawinaadda ayeeyada iyo ayeeyada kale ee korinta carruurta
Ma tahay awoowe / ayeeyo ama carruur kale oo korinta carruur ah?
NFCSP waxay bixisaa macluumaad, taageero, iyo agabyo kale oo lagu caawiyo waalidiinta iyo ayeeyooyinka iyo qaraabada kale ee qaaliga ah ee qaatay masuuliyada korinta waalidnimada sababta maqnaanshaha waalidiinta.
Muxuu barnaamijku bixin karaa?
Nasasho gaaban oo xaddidan, adeegyo, iyo waxyaabo gacan ka geysta bixinta daryeel ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn:
Ujrada howlaha iskuulka ka baxsan manhajka iyo sahayda
Umeerin ama qalab waxbarasho
Hawlaha usbuuc-hal-usbuuc ah
Shuruudda soo socota waa in la buuxiyaa si loogu qalmo:
Waa inuu yahay awoowe / ayeeyo ama qof kale oo ehel ah
Waa inuu jiraa da'da 55 ama ka weyn
Waa inuu noqdaa daryeelaha koowaad ee ilmaha
Ilmuhu waa inuu ka yaraado 19 sano
Waa inuu la noolaadaa cunugga
Sideen u dalban karaa NFCSP?
Waxaan daryeelayaa qof kale
Barnaamijka NFCSP wuxuu siiyaa nasasho, macluumaad, taageero, iyo ilo kale daryeel bixiyeyaasha qoyska.
Waa maxay NFCSP?
NFCSP waxay kaa caawinaysaa sidii daryeele u helli lahaa daryeel xasilooni. (Daryeelka nasniinta wuxuu helayaa caawinaad ku qabashada waxyaabaha aad caadiyan u sameyso daryeel-bixiye ahaan.) Haddii aad u-qalanto, barnaamijka wuxuu bixiyaa maalgelin si loogu iibsado adeegyada nasinta oo gacan ka geysan doona daryeelka qofkii aad jeceshahay gurigiisa intii suurogal ah. Maalgalintu way xadidan tahay. Codsiyada loo maro ADRC ayaa loo baahan yahay (hoos ka eeg).
Miyaan u qalmaa NFCSP?
Xannaaneeye ahaan, waad u qalantaa haddii aad bixiso daryeel aan lacag la siin mid ka mid ah dadka soo socda:
A) Da '60 jir ama ka weyn oo u baahan caawimaad howlaha nolol maalmeedka
B) Qaangaarka waallida
C) Adult naafada ah oo da'diisu tahay 19-59 (oo aad qaraabo tahay da'da 55 ama ka weyn)
D) Ilmo yar oo 19 jir ah iyo wixii ka yar (oo aad qaraabo tahay da'da 55 ama ka weyn)
Waa kuwee taageerada bulshada ee dabooli kara NFCSP?
Nasasho xaddidan, muddo-gaaban
Adeegyada chore (shaqada guriga, shaqada guriga culus)
Daryeel shaqsiyeed (labiska, qubeyska)
Hawlaha guriga ee maalinlaha ah (cuntada loo diyaariyo, adeegyo)
Kaliya inaan awood u yeesho Aabahay anigoon ka walwalin sida loo bixiyo daryeelka uu u baahan yahay waxay ahayd mid aad u weyn. ”
Iyada oo loo soo gudbiyo shaqaale-wada-shaqeyn, waxaan la xiriiray ADRC qiyaastii sanad ka hor si aan uga helo ilaha aabbahay, ee qaba cudurka Alzheimers. ADRC waxay ii ahayd mid qiimo badan aniga sanadkii la soo dhaafay iga caawiyay inaan socodkan dhex maro. Markii aan bilaabay inaan ka walwalo sida aan ugu bixiyo daryeel guri oo dheeraad ah aaba, ADRC waxay igu hogaamisay Barnaamijka Taageerada Daryeelaha Qoyska ee Alzheimer, kaas oo si weyn uga caawiyay muddada-gaaban si aan u bilaabo kharashyada qaarkood si aabbahay u helo daryeel dheeraad ah.
Kugu sheegi maayo waxa ku kalifay helitaanka lacagahaas. Kaliya inaan awood u yeesho aabbahay anigoo aan ka walwalayn sida loogu bixiyo daryeelka uu u baahan yahay aad buu u weyn yahay. Wax kasta oo yar ayaa i caawiya waanan ku faraxsanahay maalgalinta AFCSP iyo dhammaan khabiirada daryeel bixiyaasha ADRC!
News Caregiver News